बाबु पारसले गरेको लफडाबारे छोरी कीर्तिकाको यस्तो ट्वीट – Kavrepati
Home / समाचार / बाबु पारसले गरेको लफडाबारे छोरी कीर्तिकाको यस्तो ट्वीट
admin August 1, 2021	समाचार Leaveacomment 341 Views
काठमाडौं। पूर्वयुवराज पारस शाहले शुक्रबार साँझ हेल्मेट नलगाएर मोटरसाइकल चलाएपछि ट्राफिक प्रहरीले रोक्न खोज्दा लफडा गरे। जिब्रो लरबरिएको आवजमा उनले प्रहरीलाई तँ भनेका थिए। र प्रहरीले सम्झाएर उनलाई पठाउन खोज्दै उल्टै जान्न जान्न भन्दै उल्टै प्रहरीमाथि दूर्व्यवहार गरेका थिए।
यो विषयमा पारसकी छोरी कीर्तिकाले शनिबार साँझ ट्वीट गर्दै यो विषयमा प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले प्रहरीले उल्टो आफ्नो बाबुमाथि दूर्व्यहार गरेको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘हेलमेट छुटेको बिषयलाई प्रहरीले मर्यादापूर्वक व्यवहार गरि आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नु पर्नेमा अपमानजनक ब्यबहार गरेको छ।’
हेलमेट छुटेको बिषयलाई प्रहरीले मर्यादापूर्वक व्यवहार गरि अाफनाे ड्युटी पूरा गर्नु पर्नेमा अपमानजनक ब्यबहार गरेको छ।
— Kritika Shah (@Kritika__shah) July 31, 2021
हिजो राति सुत्ने बेला मोबाइल चलाउँदै थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा आजभोलि केही न केही भाइरल भइरहेका हुन्छन् । हुन त यस्ता भाइरल हुने विषयमा म खास्सै चासो राख्दिनँ । तर हिजो साँझ भाइरल भइरहेको एउटा तस्बिर र त्यसमाथिका टिकाटिप्पणीले मलाइ तान्यो ।
सामाजिक सञ्जालमा पूर्व युवराज पारश शाहले हेलमेट नलगाइ मोटरसाइकल चलाएको तस्बिर सँगै चर्चा चलेको थियो । पारसमाथि धेरैले आलोचना गरिरहेका थिए । पूर्व युवराज भएको घमण्डले उनले प्रहरीप्रशासन, ट्राफिक कसैलाई नटेर्ने गरेका कुराहरु चलिरहेका थिए ।
आज नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको अखिल फोर्सको बृहत भेला थियो । भेला अघि अखिल फोर्सले र्यालीमार्फत शक्ति प्रदर्शन पनि गर्यो । काठमाडमौंका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको र्याली माइतीघरमण्डलामा जम्मा भएर बबरमहलस्थित कार्कीव्यांक्वेटमा पुगेर सभामा परिणत भयो ।
र्यालीमा अधिकांश युवाहरु बिनाहेलमेट मोटरसाइकल चलाएको देखिन्थे ।न टाउकोमा हेलमेट छ न त अरु कुनै ट्राफिक नियम नै पालना गरेका छन् । अनावश्यक हर्न बनाइरहेका थिए, बाइक चलाउँदै र पछाडि बसेकाहरु पनि चिच्याइरहेका थिए, बाइकको आवाज अनावश्यक बढाएर चलाएको पनि देखिन्थ्यो ।
उनीहरुलाई न त ट्राफिकले छेक्यो न त ट्राफिक नियम नै लागू भयो । सँगसँगै रहेका प्रहरी, ट्राफिकहरु मुकदर्शक भएर हिँडिरहेका थिए ।यो दृश्य आज मात्र देखिएको दृश्य भने होइन । यसअघि जुनसुकै पार्टी वा पक्षले जुनसुकै उद्धेश्यका लागि गरेको र्याली, प्रदर्शनमा पनि यस्ता दृश्य देखिएका थिए र देखिइरहन्छन् ।
र्यालीमा हिँडेका युवाहरुलाई उनीहरुलाई निर्देशित गर्ने ठूला नेताहरुको सुरक्षा आफूमा भएको महसुस गरेरै सायद कुनै पनि नियम पालना नगरि आफैँ ठूलो हूँ भन्ने ध्येयले हिँडेको देखिन्छ ।हिजो पारस शाहले हेलमेट लगाएनन् भनेर पूर्व युवराज भएको घमण्ड भन्नेहरुले कुनै दलनिकट भएकै आधारमा नियम पालना नगरि बाइक चलाएको दृश्य देख्दा के भन्छन् होला ?
हिजो साँझ पारस शाह भाइरल भएजस्तै आज साँझ र्यालीमा हिँडेका युवाहरु भाइरल होलान त ? पारसलाई राजतन्त्रको आडम्बर त्याग्न नसकेका भन्नेहरुले आजका यी युवाहरुलाई श्रीपेचबिनाका पारस भनेर टिप्पणी गर्न सक्लान त ? -हनिशराज पन्त
Previous कस्तो रहला तपाईको आइतबार? पाथिभारा माताको दर्शन गरि साउन १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
Next के तपाई ‘नर्मल डेलिभरी’ गराउन चाहनुहुन्छ ? गर्भा अवस्थामा यी कुरा ध्यान दिए गर्नुपर्दैन् अप्रेशन